Delivra na-agbakwunye E-Azụmaahịa Nkeonwe na Nkewa | Martech Zone
Saturday, July 9, 2016 Friday, July 8, 2016 Douglas Karr
Ngalaba Azụmaahịa US kọrọ na ahịa ndị a na-ere n'ịntanetị nwetara ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnụahịa mkpọsa mkpọsa na 2015. Nnyocha ahụ gosikwara na ire ere n'ịntanetị nwetara 7.3 pasent nke ire ere ahịa na 2015, site na 6.4 pasent na 2014.
Email marketing mkpọsa bụ maka ihe karịrị pasent asaa nke azụmahịa e-commerce niile, na-eme ka ọ bụrụ nke abụọ kachasị arụ ọrụ ahịa ecommerce n'azụ ọrụ ọchụchọ ịntanetị, nke na-etu ọnụ na ntụgharị ntụgharị 15.8. N'agbanyeghị na ọ dị irè, ọ bụghị ndị ahịa niile dị n'ịntanetị ka e kere nha n'ihe metụtara ahịa mmefu ego na ndị ọrụ.
Maka Neil Berman, onye nchoputa, na onye isi oche nke Delivra, o doro anya na akụ na ụba e-commerce taa na-eme ka ọnụ ụzọ mepere emepe maka ọtụtụ ndị na-eweta ngwanrọ iji nwee ike ịrụ ọrụ dịgasị iche iche ndị na-ere ahịa chọrọ n'ime oghere.
Ọ bụ ihe nzuzo na ndị na-ere ahịa 100 kachasị elu nke ụwa nwere ike ịnwe sọftụwia ahịa email kachasị ewu ewu ma sie ike n'ihi na ha nwere nnukwu e-azụmahịa otu, raara onwe ha nye iji mụta ọtụtụ ọrụ maka arụmọrụ dị mma. Enwekwara ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na mpaghara na-enweghị ndị ahịa ahịa raara onwe ha nye n'ọtụtụ ọnọdụ. Ọ dị oke egwu maka ndị na-ere ahịa a ka ha nwee ike ịnweta azụmaahịa email na-eweta e-azụmaahịa, mana ha chọrọ usoro ikpo okwu nke na-enye ihe dị mkpa maka ịdị mfe nke iji yana ngwa ngwa.
Nlekọta Azụmaahịa Delivra
Azụmaahịa Delivra bụ ngwugwu kachasị ọhụrụ site na onye na-eweta software email na-enye aka ma raara onwe ya nye akụrụngwa ahia e-commerce. N'ihe banyere njikọta na Magento, Shopify, na WooCommerce, ikpo okwu dị mma maka obere ndị na-ere ntanetị n'ịntanetị na obere ma ọ bụ na-akwadoghị brik na ngwa agha-ma na-enye ohere maka ịzụ ahịa azụmaahịa email zụrụ azụ. Ozi ịntanetị ịzụ ahịa ịzụ ahịa ahaziri iche bụ otu n'ime atụmatụ ndị ama ama kemgbe research na-egosi na pasent 60 nke ozi ịntanetị gbahapụrụ agbahapụ na-eweta ego, yana imirikiti nke ahụ na-eme na 24 awa izizi nke izipu ozi email.
Ngwakọta ịzụ ahịa ngwa ahịa sọftụwia ahụ na-enyere ndị na-ere ahịa ntanetị aka n'ịkwalite onyinye ngwaahịa, imeziwanye ahụmịhe ndị ahịa, na ịkọgharị ndị ahịa niile site na ozi ịntanetị ahaziri iche. Azụmaahịa Delivra na-enyere ndị ọrụ aka ịmepụta akpaghị aka na -emepụta ngalaba dabere na data ịzụta data si Magento na WooCommerce edemede, ma obu Shopify ụdị ngwaahịa, iji ree ngwaahịa na imegharị ndị zụrụ azụ. Tụkwasị na nke a, ndị ọrụ nwere ike soro nhọta enwetara site na email iji gosipụta ozi ezipụ n'ọdịnihu ma zipụ ozi ụgbọ ala gbahapụrụ agbahapụ iji weghachite ego ha ga-enweta ma mụbaa ROI ahịa email.
Mkpokọta ụgbọ ibu azụmahịa nke onye ọrụ jikọtara ngalaba akpaka na-adabere na ịzụrụ site na edemede ma ọ bụ ụdị ngwaahịa.
Azụmaahịa Delivra ọrụ nwekwara ike ike ha nke na-eji maka mgbe nile, gbawara n'etiti ule, na triggered mailings. Akụkụ atụ gụnyere:
Itinye n'ọrụ nke hapụrụ cart data ike a kpaliri nzipu ozi nzipu ozi
Itinye n'ọrụ nke iji data na- -eche-ire ndị ọzọ ngwaahịa
Itinye n'ọrụ nke iji data ịjụ maka nnyocha ngwaahịa
Ihe ọzọ dị mkpa bụ ikike ịmepụta "ihe omume egosipụtara" dabere na nzụta site na nzipu ozi, na-enye ndị ọrụ ohere "ịtọ ma chefuo" mkpọsa akpaghị aka mgbe ha na-achịkwa oge na ozi nke nkwukọrịta metụtara azụmahịa. Flagged ihe omume ekwe a marketer inyocha ibiere, na alaka a workflow nzọụkwụ n'ime ụzọ abụọ. Dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ahịa nwere ike ịhọrọ ịtụle ma onye nnata mepere nzipu ozi ma ọ bụ na ọ bụghị, ọpịpị otu njikọ njikọ, zụrụ site na ụlọ ahịa e-commerce, wdg. maka nnata, dabere na omume nnata ma ọ bụ mmekpa ahụ nke nnata. Onye na-ere ahịa nwere ike ịhọrọ izipu ozi ịntanetị dị iche iche, melite mpaghara data ma ọ bụ zipu ozi SMS.
Azụmaahịa Delivra gụnyekwara njikọta na Nchịkọta Google Analytics. Verawepu data sitere na nchịkọta Google, njikọ a na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta usoro dị mkpa dị ka ego ha ga-enweta, ịzụrụ ihe na ntụgharị ntụgharị, yana otu esi etinye ha na nzipu ozi ọ bụla na ozi email. Na mgbakwunye na njikọta nke Google Analytics, a na-akọkwa usoro nzipu ozi na usoro na-akọwapụta nkọwapụta akaụntụ, nyocha nzipu ozi, ọnụọgụ nsuso, ọnụ ọgụgụ nnyefe na atụnyere nzipu ozi.
Ibido site na ọrụ ike Delivra Commerce bụ usoro ọsọ ọsọ maka ndị ọrụ ọhụụ na ndị dị ugbu a. Ma nkwalite ma ọ bụ ibido akaụntụ ndị ahịa, Delivra nwere ike ịmekọrịta ikpo okwu ya na data ịzụ ahịa ndị ahịa n'ihe dị ka elekere.
Tags: gbahapụrụ ụgbọ ibu emailNdiaguazụmahịa delivraemail ecommerceemailGoogle Analytics ecommercemagentoemail gịụlọ ahịazite ozi emailkpaliri emailwoocommerceemail woocommerce